Amerika: Jery todika 2008
Arzantina07 Mey 2019
Nodarohan'ny tafika mitam-piadiana Kolombiana ny tobin'ny mpiady anaty akatan'ny Tafika Revolisionera Mitam-piadiana ao Kolombia (FARC) miorina ao anatin'ny sisintanin'i Ekoadaoro, niteraka olana ara-diplomatika teo amin'ireo firenena roa tonta izany. Miaraka amin'ny filoha Venezoeliana Hugo Chávez nandray anjara tamin'ny adin-teny, izay tsy ela dia nivadika ho krizy ara-tsisintany tanteraka.
Bolivia: Toby Miaramila Any Amin'ny Sisintany Ary Fifandirana Anaty
Bolivia31 Desambra 2018
Resahina eny anivon'ireo blaogy miresaka politika avy any Però sy Shily ny fifanarahana teo amin'i Bolivia sy Venezoela ny hanao fotodrafitrasa ara-tafika eo amin'ny sisintany iraisan'i Paragoay, Shily, Però ary i Brezila.
Mediam-bahoaka29 Desambra 2018
Bilaogy Peroviana vao haingana
Mavitrika tato ho ato ny sehatra ara-politika, satria bilaogera isan-karazany no matetika nandefa momba ny zava-nitranga vao haingana ary anisan'ny nanintona ny saiko indrindra nyy nosoratan'i "La Morena" momba ny kandidan'ny antoko politikan'ny fitondrana
Mediam-bahoaka28 Desambra 2018
Nahatratra 337 ankehitriny ny isan'ireo namoy ny ainy tamin'ny horohorontany tany Ica, any Però. Ny isan'ireo naratra kosa dia 827. Mbola tsy nivoaka tamin'ny gazety Lima, El Comercio na RPP izany tarehimarika izany, tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity.
Lahatsoratra vao haingana avy ao Però
Ity manaraka ity dia fijerena kely ireo lahatsoratra sasany vao haingana notsongaina tamin'ireo bilaogy Peroviana isan-karazany; lahatsoratra izay hita fa nitarika fahalianana tamin'ny fomba iray na hafa:
Fifidianana27 Desambra 2018
Mediam-bahoaka27 Desambra 2018
Pero: Ireo Bilaogy Nalaza Indrindra tamin'ny 2006
Mediam-bahoaka08 Desambra 2018
Ho fanamarihana ny faran'ny taona 2006, nandray ny andraikitra hampiseho ireo mety ho misongadina indrindra amin'ny Weblogs Peroviana tamin'ity taona ity ireo bilaogera vitsivitsy. Taona iray nahitàna fitomboana saika tsy miovaova teo amin'ny tontolon'ny bilaogim-pirenentsika.